လက်လီ impregnated Core Bit စက်ရုံနှင့်ပေးသွင်း | အချစ်
ပိုမိုနက်ရှိုင်း။ ခက်ခဲသောပုံဖော်ခြင်းများတွင်ပိုမိုမြင့်မားသော ROP အတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ PDC လေ့ကျင့်ခန်းသည်မြေပြင်မှအောက်ခြေသို့တိုက်ရိုက်လေ့ကျင့်မှုတစ်ခုတည်းဖြင့်ပင်တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့်ပင်လေ့ကျင့်ခန်းအချိန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်များစွာသက်သာစေသည်။
Tricone bit နှင့်ကွာခြားသည် PDC drill bit သည် WOB နိမ့်သော်လည်းပိုမိုမြင့်မားသော RPM ဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့် downhole motor နှင့်အတူအလှည့်အမြန်နှုန်းကိုကောက်ယူသည်။
PDC drill bit ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည် PDC ဖြတ်များပေါ်တွင်များစွာမူတည်သည်။ မတူကွဲပြားသောဖွဲ့စည်းမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ တိကျသောလိုအပ်ချက်အတွက်ထူးခြားသောဖြေရှင်းချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။
ကွေးသောသရဖူသည်ချောမွေ့သော core ဖြစ်သည်
အဆိုပါ bit မှာတောက်ပသောရေလမ်းကြောင်းဒီဇိုင်းရှိပြီးအမြန်နှုန်းအတွက်သင့်တော်သည်။
Self-sharpening impregn insert သည်တွင်းတူးစဉ်အတွင်းဖြတ်တောက်ခြင်းကိုချွန်ထက်စေသည်။
◆ထူးခြားသော matrix ပုံသေနည်း
အဆိုပါထူးခြားသော matrix ကိုဖော်မြူလာသည် matrix ကို wear နှင့်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ကိုက်ညီစေသည်။ ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုကောင်းမွန်စေသည်
၁ ။ ကွေးသောသရဖူသည်ချောမွေ့သော core ဖြစ်သည်
၂။ မိမိကိုယ်ကိုကြည်လင်စေသည့်ထိုးသွင်းထည့်သွင်းခြင်း - Self-sharpening impregn insert သည်တွင်းတူးစဉ်အတွင်းဖြတ်တောက်ခြင်းကိုချွန်ထက်စေသည်။
3. ထူးခြားတဲ့ matrix ကိုပုံသေနည်း: ထူးခြားသည့် matrix formula သည် mat ကို wear နှင့်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ကိုက်ညီစေသည်၊ bit ၏ပိုမိုကောင်းမွန်သော ROP ကိုရရှိစေသည့်ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းနှင့်စိန်၏ wear ခံနိုင်မှုကိုကောင်းမွန်စေသည်။
4. ရေဒီယိုလှိုင်းတံပိုးဒီဇိုင်း: အဆိုပါ bit မှာတောက်ပသောရေလမ်းကြောင်းဒီဇိုင်းရှိပြီးအမြန်နှုန်းအတွက်သင့်တော်သည်။
IADC ကုဒ် M842
စုစုပေါင်းစီးဆင်းမှုareaရိယာ 1.0 in2
စံ gauge အရှည် ၁-၁ / ၂ "（38.1 မီလီမီတာ）
အထက်ထိကုံး torque 13.4 ~ 16.3KN •မီတာ
Core စည်အရွယ်အစား ၆-၃ / ၄ "× ၄" (川 ၇-၄ / ၅)
အကြံပြုထားသည့် Operating Parameters:
စီးဆင်းနှုန်း 10 ~ 30 ကို L / S က
လှည့်မြန်နှုန်း 40 ~ 150RPM
တူးဖိအား KN 30, 80
Impregnated Core Bit ပြီးပြည့်စုံသော Core ဝန်ဆောင်မှု
အနက်မှာမီတာ ၄၀၀၀ ခန့်ရှိသည်
ဤပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန် DeepFast သည်နက်ရှိုင်းပြီးခက်ခဲသောဖွဲ့စည်းမှုတွင်ဤရည်မှန်းချက်ကိုအောင်မြင်ရန် Impregnated Core Bit 8 1/2” x 4” DIC280 ကိုကမ်းလှမ်းသည်။
core ကိုနှစ်ခုပြေးအတွက် 1 15 မီတာဖြတ်လေ၏။ အရာ 3805 ကနေ 3920 မီတာ
စောင့်ကြည့်ရမည့်အချိန်သည်နာရီ ၂၀ ခန့်ဖြစ်ပြီး ROPIS သည် ၅.၇၅ m / h ဖြစ်သည်
ပြန်လည်နာလန်ထူမှု ၈၅% ကျော်
တရုတ်နိုင်ငံရှိ Liaohe Oilfield တွင် Liaohe Oilfield Coring Technology Services မှအော်ပရေတာသည်ရေနက်တွင်းမှ ၃၈၀၅ မီတာတွင်းတူးရန်စီစဉ်ခဲ့သည်။ ဖွဲ့စည်းမှုအလွန်ခက်ခဲပြီး lithology သည် 24000PSL ထက်ပိုမိုသောဖိအားနှင့်အတူကျောက်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာမာကျောသောဖွဲ့စည်းမှုကိုပြန်လည်ရရှိရန် ၈/၂ လက်မတွင်းအပေါက်ကိုအဓိကထားရန်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန် PDC core bit သည်နိမ့်ကျသော recovery rate နှင့် core cut ကိုသာလျော့နည်းသည်။ ထို့ကြောင့် Deepfast သည် ၄ ​​င်း၏ဒီဇိုင်းသစ် Impregnated Core Bit ကိုဤနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းခိုင်မာသောဖွဲ့စည်းမှုတွင်ရရှိရန်ကမ်းလှမ်းသည်။
ကားအမျိုးအစား Matrix ခန္ဓာကိုယ်
Blade အရေအတွက် 18
ရှုးအမျိုးအစား impregnated စိန်
အဓိက Cutter Siz ၃၀ SPC
gauge အရှည် 1.5 "(38.1mm)
ဆက်သွယ်မှု ၆-၃ / ၄ "x4"
မိတ်ကပ် Torque ပြုလုပ်ပါ 13.4 ~ 16.3KN.m
အော်ပရေတာကဒီစီမံကိန်းကိုအလွန်ကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ Impregnated Core Bit 8 1/2” x 4” DIC280 သည် ၁၁၈ မီတာအတောင့်ကို ၃၈၀၅ မှ ၃၉၂၀ မီတာအနက်နှစ်ခုဖြင့်ဖြတ်ခဲ့သည်။ စုစုပေါင်း Core အချိန်သည်နာရီ ၂၀ သာဖြစ်ပြီး ၂ နာရီကို ၂၄ နာရီချွေတာပြီး ၁၂၈၀၀၀ ယွမ်ချွေတာသည်။ ထို့အပြင်ပျမ်းမျှ ROP သည် ၅.၇၅ m / h ဖြစ်ပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှုန်းသည် ၈၅ ထက်ပိုသည်၊ ဤစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိရန်သော့များသည်အဓိကကျသည့်ဒီဇိုင်းနှင့်တိုးတက်မှုဖြစ်သည်။ သို့မှသာ၎င်းသည်အလွန်မာကျောသော၊ DeepFast သည်ကျောက်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးအတွက်ပြင်ဆင်သည့် coring tools များ၏စွမ်းအားကိုတိုးတက်စေရုံသာမကပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှုန်းနှင့် ROP များကိုပါတိုးမြှင့်ပေးသည့် impregnated insert နှင့် curved crown design ဖြစ်သည်။
ရှေ့သို့ သဘာဝစိန် Core bit ကို
နောက်တစ်ခု: Matrix ခန္ဓာကိုယ် PDC Core Bit
စိန် Core Drill Bit
သဘာဝစိန် Core bit ကို